Nezvedu - Ningbo Jinlai Chemical Co., Ltd.
Isu tinotsvaga kukurudziro yakajairika nevose vanobatana kwenguva refu uye tinoedza kuita mipiro yakafanira kuvanhu nepasi.
Kutarisana nevanhu, kuchengetedzeka uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, sainzi uye tekinoroji brand
Ningbo Jinlai Chemical Co., Ltd. i-tech-tech makemikari emakambani. Tichiomerera kune yekuvandudza uzivi we "kuve vanhu-vanofararira, vakachengeteka uye nharaunda-vane hushamwari, uye tekinoroji brand", tinoshandira pamwe nevakawanda vanozivikanwa epamba uye epasi rese nyanzvi yemakemikari ekutsvagisa masangano ekuzivisa epamberi uye akakura ekugadzira nzira kuti aburitse akateedzana emhando zvigadzirwa. , inosanganisira zviuru makumi mashanu t / a ye3-Chloro-2-methylpropene (MAC); 28,000 t / a ye2-Methyl-2-propen-1-ol (MAOH); 8,000 t / a yeSodium methallyl sulfonate (SMAS); 5,000 t / a yeacrylic fiber mafuta uye 2,000 t / a ye polyimide fiber mafuta, nezvimwewo. Nekuda kwekuenderera kwesainzi hunyanzvi, isu tine kugona kwakanaka kwekukwikwidza kukwikwidza kwezvigadzirwa mumusika.
Parizvino, zvigadzirwa zvedu zvakatengeswa zvakanaka kunyika dzinopfuura makumi mashanu senge United States, Japan, Germany neFrance, nezvimwewo Panguva imwecheteyo, isu takabudirira kuve mutengesi akasarudzika wePetroChina neSinopec, uye mudiwa wepasirese yepamusoro Makambani mazana mashanu.
Nemakore 'ekunyorera, zvigadzirwa zvedu zvakave zvakanyanya kuzivikanwa nevatengi vedu kune yakanakisa mhando uye mukurumbira. Ikozvino, zvigadzirwa zvedu zvave zvichishandiswa zvakanyanya mumafuta epeturu, makemikari, mishonga yekuuraya zvipuka, zvinonhuhwirira, acrylic fiber anobatsira, chizvarwa chazvino chemvura inoshanda-inoderedza inoderedza mumiririri wekongiri uye yekugadzira mapepa indasitiri, nezvimwe.Zvimwe zvigadzirwa: Yedu yakagadziriswa polyester fiber ( kusanganisira Porous zinga rehuchi-senge) mairi uye chitsva-chizvarwa chakakosha maoiri ekotoni kudhaya uye kutenderera zvakagadzirisa matambudziko mazhinji nekuruka, kusanganisira Yakakwira-mhanyisa spinnability yePorasi uye huchi-senge yakagadziridzwa polyester faibha, kugunzva kwedhayi wedonje, uye antistatic uye kutenderera kumhanya , nezvimwe.
Isu tinotenda mune izvo isu tichava mutungamiri weiri kutengeserana pasirese maererano nemhando nemitengo! "Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mitengo yakanaka uye nemabasa echokwadi" kuzvipira kwedu. Isu tinotsvaga kukurudziro yakajairika nevose vanobatana kwenguva refu uye tinoedza kuita mupiro wedu wakakodzera kuvanhu nepasi.
Iyo bhizinesi bhizinesi uzivi
Bhizinesi uzivi hwebhizinesi mweya wehukama tsika, kusimudzira kutungamira kwebhizinesi, musimboti wehupenyu hwekambani, uye simba rebhizimusi kuunganidza vanhu. Kana kambani yasvika pane imwe nhanho, inofanira kugadzirisa matambudziko matatu. Imwe ndosaka zvichikosha kumhanyisa bhizinesi. Nderupi bhizinesi rekumhanyisa, uyu ndiwo mubvunzo wechinangwa uye chinangwa chebhizinesi. Yechipiri ndeye nzira yekumhanyisa bhizinesi. Uyu ndiwo mubvunzo wenzira. Chechitatu kuvimba kuti ndiani anomhanyisa bhizinesi. Iyi ndiyo kiyi yekubudirira kwebhizinesi. Aya matambudziko matatu ndiwo matambudziko anofanirwa kugadziriswa nehunyanzvi hwebhizinesi rekambani. Patakatanga bhizinesi rezvebhizinesi rekambani, zvichibva pakunzwisisa kwedu nyaya nhatu idzi, takagadzira chinangwa che "kugadzira hupfumi nekuvandudza budiriro" uye hunhu hwe "hunyanzvi, kuwirirana, nekusimudzira." Chinangwa chedu ndechekuvaka kambani kuita yechipamba A yekutanga-kirasi, yepasi rose-nyanzvi yekugadzira yemakemikari fiber indasitiri anobatsira, mafuta uye zvinonyungudutsa.
Yakakwira Hunhu Zvigadzirwa, Unofarira Mitengo, Yechokwadi Basa